XOG XASAASI: Maxaa ka dhalan kara Dilkii Almaas Elman ee loogu geystay Xalane? +WARBIXIN | HalQaran.com
XOG XASAASI: Maxaa ka dhalan kara Dilkii Almaas Elman ee loogu geystay Xalane? +WARBIXIN
Marxuumad Almaas Elman
Muqdisho (Halqaran.com) – Ma sahlano in toogasho ceynkani oo kala ah ay ka dhacdo wadada xiriirisa Xerada Ciidanka Amisom ee Xalane iyo Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, marka aad eegto sida amnigooda loo adkeeyay.
Dilkan oo lagu fuliyay qoriga diiradda leh ee meelaha fog fog wax ka dili kara ayaa waxay wararka soo baxayan sheegayan in laga dhex tuuray xeendaabka Xalane. Almaas Elman ayaana u geeriyootay xabad ka haleeshay qaybaha sare ee jirkeeda.
Qof kasta wuxuu fahamsan yahay in cid ka soo duushay bannaanka aanay dil ka gaysan karin halkaasi, haddii aanay gacan gudaha ah jirin, waxaa kaloo la ogyahay in dadka baaritaano adag lagu marsiiyo Garoonka Aadan Cadde iyo Xarunta Xalane, kolka ay gelayan.
Almaas Elman waxaa la toogtay oo la dilay xilli ay la socotay gaari, kaasoo ku socdaalayay inta u dhaxeyso Xerada Xalane iyo Garoonka Aadan Cadde, waxayna daqiiqado ka dib u geeriyootay dhaawac culus oo ka soo gaaray toogashadaasi.
Waxa dadka argagaxa gelin kara ayaa ah rasaasta casriga ah ee lagu dilay gabadhan. Gumaca xabadda ku dhacday oo laga soo saaray ayaa lagu faafiyay barraha bulshada, waxaadna arkaysaa in dadku fallanqaynayo.
Shaki kuma jiro haddii dad dibadda laga soo abaabulay aanay ka masuul ahayn dilkaasi uu tuhunka geli karo Dowladda Federaalka, Reer Galbeedka iyo Ciidanka Amisom ee degan Xerada Xalane, kuwaa oo ah cidda amniga wax laga weydiin karo.
Tani ayaa waxay dhaawici kartaa diblomaasiyiinta Soomaaliyeed iyo kuwo shisheeye ee sida joogtada ahi uga hawlgala Xerada Xalane iyo wafdiga raxan raxanta ugu soo degga, xilliyada ay dalka soo booqanayan. Dilkan wuxuu yarayn karaa dhaqdhaqaaqii xoogga lahaa ee halkaasi ka jiray.
Sidoo kale dilka Almaas Elman ayaa wuxuu cabsi gelinaya bulshada Soomaaliyeed, sama falayaasha, dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa, siyaasiyiinta, ganacsatada iyo Wariye-yaasha, iyadoo ay wiiqayso amnigii ay dadka dareemayeen, inta ay ku sugan yihiin Garoonka Aadan Cadde & Xerada Xalane.
Xeeldheere-yaasha iyo dadka caqliga u saaxiibka ahba waxay qabaan in dilkaan uu ahaa mid la soo qorsheeyay, loona bareeray falcelin kasta oo ka imaan karta. Wax badan lagama garanayo waxa uu salka ku hayo dilka Almaas Elman, waxayse su’aal daba taallaa juhdiga mug’ga weyn leh ee dilkeeda lagu bixiyay iyo hubka casriga ah ee loo adeegsaday.
Dilkan oo noqonayo kiisii ugu horeeyay oo qof aan hubeysnayn loogu gaysto xeendaabka Xalane ayaa abuuray su’aalo fara-badan oo ay dadku iska weydiinayan, isla-markaana ay Madaxda Qaranka ka doonayan inay uga jawaabaan.
Waxaa xusid mudan in dilkan uu hoos u dhigi karo kalsoonidii ay shacabka Soomaaliyeed ku qabeen Madaxda Dowladda, kuwaa oo eedeymaha ugu xoogan wejihi doono, waa haddii ay ka gaabiyan inay bannaanka keenaan kuwii ka masuulka ahaa dilkaasi.
Midda u baahan in la iftiimiya waxay weeye, kuwii u bareeray in ay wax ku dilaan goobta ugu weyn ee laga ilaaliyo Garoonka Aadan Cadde, ay berrina beegsan karaan Madaxda Dowladda, waana wax u baahan intii aanay wado furin in laga dhiidhiyo.
Inkastoo dadka qaarkii ay qabaan inay adag tahay in dowladdu ciqaabto, haddii gacmo shisheeye ku lug yeeshaan dilkaasi ayaa waxaa hadana Qaranka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka gilgishaan falkaasi guracan, dadkana u muujiyan inay yihiin kuwii iyaga ka masuulka ahaa, cid kasta oo ku soo xadgudubtana ay diyaar u yihiin inay la xisaabtamaan.
Maxaa ka dhalan kara dilkii Almaas Elman